Miditra ao Senegal ny RIU Hotels & Resorts
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miditra ao Senegal ny RIU Hotels & Resorts
Ny tambajotra RIU Hotels & Resorts dia nanambara ny fividianana tranokala 25 hektara ao amin'ny faritr'i Pointe Sarène eo amin'ny morontsiraka andrefan'i Senegal, toerana paradisa izay eo afovoan'ny fizotran'ny fizahantany. Miaraka aminy, manamafy ny fanolorantenany ny kaontinanta Afrika ity rojo ity, izay efa fananany trano fandraisam-bahiny enina (dimy any Cape Verde ary iray any Tanzania) ary mihazona hotely dimy hafa any Maraoka.
Ny fampiasam-bola nomanina dia mahatratra 150 tapitrisa euro, izay misy ny fividianana ny tranokala sy ny fampandrosoana ireo hotely ho avy amin'ny toerana haleha. Ny haben'ny tranokala dia ahafahana manangana fananana roa, ary izy io dia vidiana ao anatin'ny sehatry ny fiaraha-miasa miaraka amin'i SAPCO (Fikambanana ho an'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny morontsirak'i Senegal sy ny faritra fizahantany). Miara-miasa akaiky izy ireo amin'ny fanatanterahana ny tetikasa, izay eo am-pananganana drafitra drafitra ary hatomboka amin'ny Novambra.
Ny tetikasan'ny RIU any Senegal dia hisy dingana roa: amin'ny voalohany, hisokatra ny hotely iray eo amin'ny faritra Classic, misy efitrano 500 eo ho eo; ary amin'ny faharoa, mikendry ny hanangana trano fandraisam-bahiny ao amin'ny tandapan'i Riu ity rojo ity, miaraka amina vahiny 800 eo ho eo.
Ny fikasan'ny tompon'andraikitra eo an-toerana sy ny fizahan-tany hampiroborobo ny toerana alehany dia hita tamin'ny famaranana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Blaise-Diagne tamin'ny taona 2017, izay 35 km miala ny tranokala azon'ny RIU, ary làlambe mampitohy azy amin'ny tanànan'i Dakar. Mba hamenoana io lalambe io sy ny tetikasan'ny hotely hotely dia mandeha ny fanamboarana bypass izay hampifandray ny làlambe mankany amin'ny toerana vaovao izay eo an-dàlam-pamolavolana.
Ary koa ny fandraisana mpiasa sy fanofanana mpiasa amin'ny fananganana trano fandraisam-bahiny, aorian'ny fampandrosoana azy ireo dia hanangana asa 300 ho an'ny fanokafana ny trano tsirairay ny RIU, izay mitentina 600 ny fahafahan'ny asa vaovao raha vantany vao natomboka ny hotely roa tonta. Ho fanampin'izay, tafiditra ao anatin'ny fanolorantenany amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ireo orinasa vaovao, io drafitra io dia efa nanomana drafitra fananganana mahomby amin'ny trano voalohany aleha.
Mankalazà ny Andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny maha-vahiny maharitra anao
Manatevin-daharana an'i Nordic i Finlandy amin'ny fampihenana ny fandefasana entona fiaramanidina